January 2022 – Grab Love Story
by admin January 29, 2022 January 29, 2022 0
ခုတင်ပေါ်ဒူးလေးထောင်ထိုင်နေတဲ့သူမ ထမီလေးကိုအသာမတင်ပီးအမွှေးရေးရေးနဲ့ခြေသလုံးလေးတေကိုပွတ်သပ်ဆုပ် နယ်ပီးအနမ်းလေးပေးလိုက်တယ်။ အပြင်ပန်း အသားညိုတယ်ထင်ရပေမဲ့ထမီဘဲအမြဲဝတ်တဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့အတွင်းသားလေးကဝင်းမွတ်နေတာဘဲ့ပေါင်သားလေးကိုအသာလေးလျာထိပ်နဲ့ပွတ်စွဲပေးပီး အတွင်းသားနုနုလေးကို စုတ်စွဲလိုက်တယ် သူဆီကအသက်ရူုသံလေးကြားနေရတာ နုညံ့သောအသားစိုင်နှစ်ခုအထိတွေ့ လက်တွေက အတွင်းခံပန်းရောင် ဖောင်းဖောင်းလေးဆီ အကွဲကျောင်းလေးအတိုင်းစုန်ဆန်စွဲလိုက်တယ် သူမပေါင်မှာအနီကွက်လေးတေအစီရီ သူလူးလွန့်လာနေပြီ အတွင်းခံလေးလဲစိုထိုင်းနေပြီ။ ချစ်သူ့ထမီလေးကိုအသာယာလေးဆွဲချွတ်လိုက်တယ် အိုး နေမထိထားတဲ့ပေါင်တံသွယ်လေးတွေက သေွးကြောစိမ်းလေးတွေတောင်မြင်နေရတယ့်။ အောက်ပိုင်းဗလာကျင်းသွားတဲ့သူမလေးကိုတက်မက်စွာကြည့်နေမိတယ်။ ပန်းနုရောင်ပင်တီပေါ်ကဘဲအဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးငုံပီးအကွဲကြားလေးကိုလျာဖျားလေးနဲ့နာနာလေးထိုးလိုက်တယ် ။သူမအံသြစွာကြည့်ရင်း ကျနော့်ခေါင်းကိုကိုင်ဆံပင်တေကိုဖွတယ်။ …
အပိုင်း(၁) ထွန်းခင်သည်ငယ်ငယ်ကတည်း ကဆံပင်ကိုစွဲလန်းစိတ်ရှိသူတယောက်ဖြစ်သည်. ဘယ်လောက်တောင်စွဲလန်းလည်းဆိုရင် အိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည် မိန်းကလေးတွေ ခေါင်းလျှော်ရေချိုးနေတာ တွေ့ရင်သူ့မှာ ဆံပင်ရှည်တွေကို ခိုးခိုးကြည့်ပြီး စိတ်မှန်းဖြင့် ဂွင်းထုရတာကို နှစ်သက်နေမိကာ ကြာလာတော့အားမရတော့ဘူး ဖြစ်နေတော့သည်. ထိုအခါအိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည် မိန်းကလေးတွေ အိမ်ကိုအလည်သွားပီး သူတို့ဆံပင်အကျွက်တွေကို သူတို့မသိအောင်လိုက်ရှာယူပြီး အိမ်ရောက်ရင်ဆံပင်ရှည်အကျွတ်တွေကို နမ်းပီးဂွင်းထု ရတာပိုကြိုက်လာတယ်. …
သူ့ကို မုန်းလို့ မေ့လို့ မရဘူးကွာ
နောက်တနေ့ မနက်မှာ နိုးနေပေမယ့် အိပ်ရာထဲက သူ မထွက်ချင်လို့ ဆက်အိပ်နေတဲ့အချိန် ဖုန်း လာလို့ ကုတင်ဘေး ကပ်ရက် စားပွဲပေါ်က ဖုန်းကို လှမ်းကောက်ကိုင်လိုက်တယ် ။ “ ထင်အောင်ကျော်လားဟင် …” “ ဟုတ်ကဲ့…မမ ” ဒေါ်ရွေဖြူသန့် ..ခေါ်တာ ….။ “ …
ပြုံး၍ကြည့်နေသော မူမူ၏ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုသူ၏လက်နှစ်ဖက်က ဆုတ်ကိုင်လိုက်မိသည် ပြီးတော့မူမူ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုသူ့ဖက်သို့ဆွဲယူလိုက်ရာက မူမူ၏ပါးဖေါင်းဖေါင်းလေး နှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်နမ်းလိုက်သည်။သူ၏အနမ်းကို ကြေနပ်စွာဖြင့်ခံယူနေသော မူမူက သူမ၏မျက်နှာလေးကို မော့၍ပေးထားရုံသာမကကြည်နူးစွာဖြင့်ပင်သူမ၏မျက်လုံးလေးများကို မှေး၍ချထားပေးသေးသည်။ မူမူ၏ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ကို နမ်းပြီးလိုက်ကာမှကျော်စွာ၏ကိုယ်တွင်းမှသွေးသား များက လွုပ်လွုပ်ရွရွဖြစ်လာကြသည်။ကျော်စွာ၏လက်နှစ်ဖက်က မူမူ၏ကိုယ်လုံးလေး ကိုကျောမှသိုင်း၍ဖက်လိုက်မိသည်။ပြီးသည်နှင့်မူမူ၏မျက်နှာလေးကိုတပ်မက်စွာ ကြည့်နေရင်းကပင် သူ၏မျက်နှာက ငုံ့၍ ဆင်းသွားပြီးလျှင်ထူထူလေးလုံးနေသော မူမူ၏နွုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဖိကပ်ကာစုပ်နမ်းလိုက်တော့သည်။ …
by admin January 23, 2022 January 23, 2022 0
သူငယ်ချင်း ၃ယောက်..သူဇာ.. နှင်းအိ..အောင်ကြီး.. တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ ၃ယောက်သား ပျော်ပျော်ပါးပါး ချောင်းသာကို ခရီးထွက်ကြတာပေါ့ ချောင်းသာရောက်တော့ တည်းခိုခန်းတခုမှာသူဇာနဲ့ နှင်းအိက တခန်း..အောင်ကြီးက တယောက်ထဲ တခန်းပေါ့ ညက အိပ်ရေးပျက်လာကြတာတော့ တည်းခိုခန်းရောက်တာနဲ့ တရေးတမော အိပ်နှင့်လိုက်ကြတာပေါ့.. နေပူတာလည်း ပါတာပေါ့.. ညနေကျမှ ပျော်ပျော်ပါးပါး …
ကျမနာမည်ကစုလှိုင် အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ပေါ့ ကျမ အမျိုးသားကတော့ ကိုနိုင်အောင်ပါ။ ကျမနှစ်ယောက်စလုံး ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာပဲ အတူတူလုပ်ကြပါတယ်။ လင်မယားနှစ် ယောက်စလုံးက ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အိမ် ထောင်သက်တမ်းလေးနှစ်အတွင်းမှာ ကလေးမယူဖြစ်ကြသေး ပါဘူး။ ကိုနိုင်အောင်ကတော့ အသက်၃၄ နှစ်ရှိပြီး ကျမကသူ့ ထက်အသက်လေးနှစ်ငယ်ပါတယ်။ ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ ငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာသော ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ကိုနိုင်အောင်ရဲ့မိဘတွေကနယ်မှာခေါ်ထား သော်လည်း …
ကျနော့်နာမည်ကဇေရဲပါ ခင်တဲ့သူတွေက ကိုဇေလို့ခေါ်ကြသလို ကိုရဲလို့လဲခေါ်ကြတယ် ကျနော်ကအလုပ်တော့မယ်မယ်ရရမရှိပေမယ့်အိမ်ကမိသားစုကုန်စုံဆိုင်လေးမှာမိဘတွေကိုကူပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက်ပေါ့ အားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အချစ်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုဝင်ပြီးဟိုဖတ်ဒီကြည့်နဲ့ အလုပ်ဝိုင်းလုပ်လိုက်နဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့အချိန်တွေကုန်နေတာပေါ့ ကျနော်ကအရင်ကတည်းကဆံပင်ရှည်ကောင်မလေးတွေဆိုအရမ်းသဘောကျတာ အဲလိုဆံပင်ရှည်မလေးတွေကိုသာပိုင်ဆိုင်ရရင်ချစ်ရရင်ဆိုပြီးတစ်နေ့တစ်နေ့ စိတ်ကူးရင်းနေရတာပေါ့ ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ထဲကသူတို့ ချစ်သူတွေ မိန်းမတွေကို ပုံတွေမျှပေးတာတွေကိုလဲ အရမ်းသဘောကျတာ အဲလိုနဲ့တစ်နေ့တော့ဆံပင်ရှည်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကို ကျောင်းထဲက ညီကိုတစ်ယောက်က တင်လိုက်တော့အဲတာကို အရမ်းသဘောကျပြီး ပုံလေးတွေထပ်တင်ပေးဖို့ ကို သွားတောင်ပြောခဲ့သေးတာအဲ့ဒီမှာပဲ ကျနော့်ဘဝထဲကို နှင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေး …
ကျမလိုမိန်းကလေးတယောက်မှာ အတူနေတဲ့ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆို ယုံမလားဟင်… ထူးခြားတဲ့ကျမဘဝကဒီလိုစခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းကိလေသာတဏှာနဲ့မကင်းပါဖူး.. ကျမလဲလူတယောက်ပဲမို့အပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရပါဖူး.. ကျမ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ကိုကိုနဲ့စတွေ့ခဲ့တယ် ကိုကိုက ကျမထက်၆နှစ်ကြီးတယ်လေ.. ဒီအရွယ်ထိ ပိပိပြားပြားနေလာခဲ့တဲ့ကျမ ကိုကိုရဲ့စူးရဲတဲ့အကြည့်တွေမခံနိုင်ပါဖူး.. တိုတိုပြောရရင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ် နှစ်သစ် နေ့လေးမှာပေါ့..။ ကျမကအဖြေပေးတာနဲ့ကိုကိုက ကျမကိုမျက်နှာအနှံ့အနမ်းတွေပေးလိုက်တာ ကျမမှာ ရင်ထဲမောပြီးနေရောဘဲလေ.. ကိုကိုကတဆင့်တက်ပြီး ကျမအင်္ကျီအောက်ထဲလက်ရှိုထည့်တယ် နို့ကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်စကိုင်ပါတော့တယ်..အထိအတွေ့ကြောင့်သာယာတာရောကြောက်တာကောပေါင်းပြီးလှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်ပါဖူး လူတွေလဲရှိတယ်ကိုကိုဆိုတော့ …
ကျမနာမည်က ဖြိုးသူဇာ လူမျိုးပေါင်းစုံနေတဲ့ တနသ်ာရီတိုင့်းရဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာမှာနေတယ် အဖေဖြစ်သူက ငယ်ငယ်ထဲက ဆုံးသွားတယ် အမေ နဲ့ အမေ့ရဲ့ ညီမဖြစ်သူ အဒေါ်တို့နဲ့နေတယ် အမေက အရက်သမား မိန်းမဆိုးပေါ့ အဒေါ်ဖြစ်သူက ဖဲသမား လေ ကျမကို ရွာက ရပ်မိရပ်ဖတွေက ကျောင်းထားပေးလို့ ကျောင်းဆိုတာ နေခဲ့ရတဲ့ဘဂပေါ့…ဇာတ်လမ်းအစ …
ကျနော့်မိန်းမနာမည်အေးအေးသင်း၊အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်​လောက်​၃၄၂၄၃၆ဆိုဒ်​ဘော်​ဒီလှတဲ့အပျို ​ချောခယ်မနာမည်ကအေးအေးနှင်း၊သင်းသင်းနှင့်နှင်းနှင်းပေါ့။အရှက်ကုန်ဆိုသလောက်ကျနော်တို့လင်မယားကဲခဲ့တာပြောပြမယ်၊၊မင်္ဂလာဦးညမှာကိုသင်းသင်းကိုကျနော်လိုးတာ၊ခလေးတွေအိပ်ပေမယ့်ခယ်မကမအိပ်သေးဘူး၊သူ့အသံမကြားရတော့အိပ်ပြီဆိုပြီးတွယ်တာ၊၊နယ်မှာဆိုတော့လင်မယားခန်းအတွက်သင်းသင်းနှင့်နှင်းနှင်း​တို့အိပ်တဲ့အခန်းကိုယူလိုက်ရတယ်ဝါးထရံကာလေးတွေနဲ့ပေါ့မိဘတွေနှင့်ခလေးတွေကအောက်ထပ်မှာအိပ်ကြပြီးကျနော်တို့ကအပေါ်ထပ်ခိုးလေးပေါ်မှာနှင်းနှင်းကတော့ကျနော်တို့အခန်းဘေးကအပြင်မှာခြင်ထောင်ပြီးအိပ်နေတယ်သူကတော့အိပ်ရာပြောင်းလို့မအိပ်နိုင်သေးဘူးကလေးတွေအသံတိတ်သွားမှကျနော်လည်းသင်းသင်းကိုနမ်းပြီးအဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်ကြတယ်၊၊မီးမှောင်နေပေမယ့်ပူမှာစိုးလို့ခေါင်းရင်းကပြူတင်းတံခါးဖွင့်ထားတာလရောင်လေးကအခန်းထဲဝင်နေတာလေ၊၊အဝတ်အစားတွေချွတ်တော့ကျနော့်မိန်းမကိုယ်လုံးလေးကပေါ်လာတယ်၊၊လရောင်လေးနှင့်အရမ်းမိုက်တယ်ဗျ၊၊နို့လေးကလုံးပြီးမာနေတာပဲ၊၊အပေါ်ကခွပြီးနို့စို့ပစ်လိုက်တယ်၊၊” ယားတယ် ကိုကျော်”တဲ့အေးလေသူမှနို့စို့မခံဘူးတာ၊၊သမီးရည်းစားဘဝကကျနော်လည်းလူမလစ်လို့နို့မစို့ခဲ့ရဘူးလေ၊၊နို့လေးကိုအင်္ကျီအောက်ကပဲလက်နှိုကိပြီးပဲကိုင်ခဲ့ရတာကိုး၊၊ကျနော်လည်းအားပါးရစို့တော့သင်းသင်းကအသံလေးတွေထွက်လာတယ်၊ဒီတော့ကျနော်လည်းအောက်ဆင်ပြီးအဖုတ်ကိုယက်ပစ်လိုက်တယ်၊”မရွံဘူးလား…ကိုကျော်”လို့အသံတိုးလေးနှင့်ပြောတော့“မရွံပါဘူးကိုယ့်မိန်းမဟာပဲရွံပါဘူးသင်းသင်းလည်းရွံလို့မရဘူးနှော်” “အင်းပါ..ကိုကျော်တောင်လုပ်ပေးတာ မရွံပါဘူး”ကျနော်လည်းအကွဲကြောင်းတလျောက်ယက်ပေးတာသင်းသင်းကအသံတွေထွက်နေတယ်၊၊အိမ်မှာအဖေအမေတွေနိုးသွားမှာစိုးလို့သာသိပ်အသံမထွက်တာလေ၊၊ကျနော်မိန်းရပြီဆို​​တော့ကာမစည်းစိမ်အပြည့်အဝခံချင်တယ်လေ၊၊ကိုယ်ယက်ပေးမှသင်းသင်းကိုနောက်ဆိုစိတ်တိုင်း​ကျခိုင်းလို့ရမှာမို့ကျနော်ကအပျိုစင်အဖုတ်ကိုအားရပါးရယက်ပေးနေတာ၊၊အဖုတ်ကိုဖြဲပြီးလျှာကိုမွှေပစ်လိုက်တော့ “အင်း ဟင်းအင်းဟင်းနှင့်မြည်တယ်၊၊လျှာနှင့်ယက်တော့လည်းအသံက”ပလပ်..ပလပ်အသံတောင်ထွက်တယ်၊၊ထွက်မှာပေါ့သင်းသင်းကလည်းအရည်တွေထွက်နေတာကိုး၊ကျနော်ကကာမစိတ်နည်းနည်းထန်တယ်၊၊လူပျိုဘဝမှာတောင်ဂွင်းထုရင်အနည်းဆုံးသုံကြိမ်လောက်ထုနိုင်တယ်၊၊လေးကြိမ်မြှောက်ထုတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်သွားလာနိုင်ပေမယ့်လှေကားအဆင်းမှာမလွယ်ဘူး၊အတက်မှာတက်နိုင်ပေမယ့်အဆင်းမှာဒူးခွေပြီးလဲချင်သလိုဖြစ်တာကြောင့်လေးကြိမ်မထုတော့ဘူး၊သုတ်ထွက်လည်းထိန်းထားနိုင်တယ်လေ၊၊ကျနော်ကသင်းသင်းအစေ့ကိုလျှာဖျားနှင့်ထိုးဆွပေးတာသင်းသင်းတစ်ယောက်”အီး ဟီး”ဆိုပြီးတုန်တုန်သွားတယ်၊၊အစေ့ကိုနှစ်မိနစ်လောက်စုပ်ပေးတာသင်းသင်းတစ်ယောက်တုန်ပြီးအဖုတ်ထဲကအဖြူနှစ်ကလေးတွေထွက်ပြီးသူမပြီးသွားတယ်။ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရဘဲ၊၊အသက်ရှူသံတွေထွက်ပြီးမောနေတယ်ဗျို့။ ကျနော်လည်းသင်းသင်းပြီးသွားတော့ရပ်လိုက်ပြီးသင်းသင်းဘေးပက်လက်လှန်လိုက်တယ်”သင်းသင်းကိုကျော်လီးကိုစုပ်ပေးဦ”ဆိုပြီးလီးအရေပြားကိုလှန်လိုက်တယ်၊၊သင်းသင်းလည်းအိပ်ရာကထလာပြီးတပြွတ်ပြွတ်နှင့်စုပ်တယ်၊၊ဘယ်အရသာရှိပါ့မလဲ၊၊တောင်တော့တောင်နေတာပေါ့လီးနှင့်လျှာနှင့်တွေ့တာမတောင်ပဲနေပါ့လား၊အင်းရန်ကုန်ရောက်မှသင်ပေးရမယ်၊၊သုံးမိနစ်လောက်ပဲစုပ်ပြီးအာညောင်းတယ်ဆိုပြီးရပ်လိုက်တယ်၊၊ အဲဒါကြောင့်နှင်းနှင်းကိုလိုးဖို့ကြံရတော့တာပေါ့ကုတင်မရှိတော့မွေ့ယာမှာပဲပက်လက်လှန်ပြီးလှေကြီးထိုးပြီးဆွဲရတယ်၊၊အစေ့နှင့်အဖုတ်ကိုလီးနှင့်ကလော်ပြီးသုံးမိနစ်လောက်အထဲကိုမထည့်ပဲလုပ်လိုက်တယ်၊၊သင်းသင်းဆီကအသံလေးထွက်လာမှအဖုတ်ထဲလီးစသွင်းတာ၊အပျိုဆိုတော့တန်းပြီးသွင်းပစ်လို့ရတယ်အ​ရမ်းနာသွားမယ်၊၊ဒီတော့အဖျားလောက်ပဲသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နှင့်သုံးမိနစ်လေးမိနစ်လောက်အချိန်ဆွဲပြီးလိုးပေးပြီးသင်းသင်းအသံလေးခပ်စိပ်စိပ်ထွက်လာမှာဆက်​ကနဲထိုးသွင်းပစ်လိုက်တာ”အာ့….ကိုကျော်”ဆိုပြီးအသံကျယ်ကျယ်ထွက်သွားတယ်၊၊အပြင်မှာနှင်းနှင်း​​တောင်အိပ်နေရင်း္ဂ​လန့်နိုးသွားလောက်တယ်။ပြီးတော့ကျနော့်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းသေးတယ်၊၊ကျနော်လည်းခဏတော့ရပ်ပစ်လိုက်ပြီးနို့ပြန်စို့ရတာပေါ့၊၊သင်းသင်းဆီကအသံထွက်လာတော့ထပ်ပြီးအဆုံးထိသွင်းပစ်ရတာပေါ့၊၊ဒီတော့လည်းသင်းသင်းကတဟီးဟီးအသံထွက်လာတာပေါ့၊၊ကျနော်ကအားနှင့်မဆောင့်ရတော့အားမရဘူးဗျ၊၊ဆယ်မိနစ်လောက်တွယ်ထည့်လိုက်ပြီးရပ်လိုက်တယ်၊၊ပြီးတေားသင်းသင်းကိုကုန်းခိုင်းပြီးနောက်ကနေလိုးတော့”နာတယ် ကိုကျော်ဆိုတော့တဖြေးဖြေးကြိတ်လိုးလေးလိုးရတာပေါ့နောက်ထပ်ဆယ်မိနစ်လောက်လိုးပြီးတော့ကျနော်လည်းပြီးချင်လာတာလေ၊၊ကျနော်အဆုံးထိထည့်ပြီးပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ၊၊လူလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုက်သွားတာပေါ့ဗျာ။”သင်းသင်းကောင်းရဲ့လား””အင်း”ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အဝတ်အစားထဝတ်ပြီးဖက်ကာအိပ်လိုက်ကြတာပေါ့။ နောက်တစ်ရက်မိုးလင်းတော့စင်းသင်းတို့အဖေအမေကိုကန်တော့ပြီးရန်ကုန်ကိုလာလိုက်တယ်၊၊ရန်ကုန်မှာကျတော့စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်လိုးရတော့အရမ်းကောင်းတာပေါ့သင်းသင်းလည်းလီးစုပ်တတ်လာသလိုဖင်တောင်ချလို့ရလာတယ်၊၊ချစ်စခင်စကြင်နာစပဲလေအပီအပြင်ဆော်လို့ရလာတာ့ပေါ့ဗျာ။ကျနော်လည်းအလုပ်ကငွေရနေတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ပါပဲ၊၊တစ်လနောက်တော့သင်းသင်းအဖေကားတိုက်ခံရပြီးဒူးခေါင်းရိုးကျိုးတယ်၊၊ကျန်တဲ့နေရာကျိုးပေမယ့်ကျောက်ပတ်တီးစည်းလိုက်တာကောင်းသွားပေမယ့်၊ဒူးခေါင်းရိုးကျိုးတာကျတော့မကောင်းတော့ပဲချိုင်းထောက်ကြီးနှင့်နေရတာဘာအလုပ်မှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးခလေးတွေကလူလားမမြောက်သေးတော့အားလုံးကျနော့်တာဝန်ဖြစ်လာတယ်၊၊ငွေရတဲ့ကာလမို့လို့သင်းသင်းတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ထားနိုင်တယ်လေ၊၊သင်းသင်းကသူ့အဖေအမေမိသားစုကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ကျနော်ကိုရွှေပေါ်မြတင်ဆိုသလိုပဲ၊၊ကျ​​နော်​ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုတာပဲ၊၊ကျနော်လည်းလိုးရင်းဆော်ရင်းသင်းသင်းကကိုယ်ဝန်ရလာတယ်၊၊အစောပိုင်းခြောက်လအထိကျနော်လုပ်ဖြစ်တယ်၊၊နောက်တော့မလုပ်ရဲတာနှင့်လီးစုပ်ခိုင်းရတာပေါ့၊၊ဒါပေမယ့်သိပ်အားမရတော့ဘူး။သင်းသင်းကဈေးဝယ်ဘာဝယ်တာလမ်းလျောက်တော့ဝယ်နိုင်သေးတယ်၊၊ကျနော်ကရှစ်နာရီလောက်ရုံးသွားရလို့သူနှင့်မလိုက်ဖြစ်ဘူး၊သင်းသင်းပဲမနက်စောစောထတမင်းကြော်ပဲပြုတ်ဝယ်ကော်ဖီဖျော်ပြီးဈေးသွားလေ့ရှိတာပေါ့၊၊ခြောက်လလောက်ကြာတော့သင်းသင်းကိုစောင့်ရှောက်ရအောင်နှင်းနှင်းကိုကျနော်တို့ဆီလွှတ်လိုက်တယ်၊၊ကျနော်လည်းနှင်းနှင်းရောက်လာ့သင်းသင်းပြောတာနှင့်အခန်းတွေကန့်ရတာပေါ့နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်လည်းတစ်လုံးထပ်ဝယ်ရတာပေါ့၊၊နှင်းနှင်းကသူ့အမအိမ်မှာနေရပြီးတိုက်ခန်းဆိုပြီးလုံခြုံတာကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်၊၊သူ့အမဈေးသွားတဲ့အချိန်သူကထမင်းကြော်ကော်ဖီဖျော်ပြီးကျနော်ကိုလည်းကျွေး သူလည်းစားပေါ့၊၊သူကညအိပ်ရင်ဘရာရောပင်တီပါချွတ်အိပ်လေ့ရှိတယ်။သူ့အခန်းဘက်ကပြူတင်းပေါက်မရှိ​တော့ပူတယ်လေ၊၊အဝတ်ပါးလေးဝတ်ပြီးတော့ပေါ့မနက်ကမှဘရာဝတ်ပြီးအိပ်ခန်းထဲကထွက်လာပြီးမျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီထမင်းကြော်တာ။ကြာလာတော့ကျနော်နှင့်ပိုပြီးရင်းနှီးလာသလိုကျနော်လည်သွားရည်တမျှားများကျနေမိတယ။် ကျနော်လည်းအချစ်ကတစ်ယောက်တည်းနှင့်မလုံလောက်တော့ဘူးအချစ်များများလိုချင်လာတယ်၊ဒီတော့ခယ်မချောချောလှလှကိုလိုးချင်လာတယ်၊၊ဆိုရိုးစကားတောင်ရှိသေး၊ခဲအိုဆိုတာခယ်မပေါင်တစ်ခြမ်းကိုပိုင်တယ်ဆိုတာ၊ကျနော်ကတစ်ကိုယ်လုံးရအောင်ကြံမယ်ကျနော်လည်းနေမြင့်လေအရူးထလေဆိုသလိုသင်းသင်းကိုယ်ဝန်ရင့်လေတဏှာပိုးထလေပေါ့ဗျာ။ဘာလို့လည်းဆိုရင်တရက်တရက်လီးစုပ်ခံရတာနှင့်အာသာမပြေဘူး၊တညတလေတံခါးလေးစေ့ရုံစေ့ထားပြီးအားမရတဲ့ညဆိုရင်မိန်းမကိုကုန်းခိုင်းပြီးဖင်ကိုဖြေးဖြေးလေးလိုးသေးတယ်၊၊ကိုယ်ဝန်ရှစ်လလောက်အထိသင်းသင်းကိုစည်းရုံးပြီးလိုးတယ်၊၊သင်းသင်းကလည်းကိုယ်ဝန်ရှိပေမယ့်၊ကျနော့်တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောရတယ်၊၊သူကလည်းကျနော်အမြန်ပြီးအောင်အသံလေးတွေထွက်ပြီးအော်ရတာပေါ့လေ၊၊ကျနော်လည်းတမင်တကာနှင်းနှင်းသိအောင်အီးအားအီးအားပေါ့၊နှင်းနှင်းကသိတယ်မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာ၊၊တခါတလေမိန်းမမရှိတုန်းလေးတဏှာစကားတွေပြောပြောနေတော့နှင်းနှင်းကတံခါးပိတ်အိပ်တာဗျ၊ဂျက်ထိုး​ထားတော့ဝင်မရဘူးပေါ့၊၊တနေ့မှာမနက်အစောကြီးနှင်းနှင်းဝမ်းသွားတယ်။သုံးလေး ကြိမ်သွားတော့ဆေးသောက်ပြီးဆက်အိပ်တယ်၊နှင်းနှင်းတံခါးပိတ်ဖို့မေ့သွားတာပေါ့၊၊သူ့အမသင်းသင်းဈေးသွားတယ်လေ၊ကျနော်လည်းအိပ်ရာကထပြီးထမင်းကြော်ကြော်ပေးမယ့်သူမရှိတော့နှင်းနှင်းအခန်းကိုကြည့်တဲ့အခါတခါးစေ့ထားရုံသာတွေ့တော့ကျနော်ဝင်သွားလိုက်တယ်၊ဒီအကွက်ကကျနော်ကျားချောင်းချောင်းနေတာလေနှင်းနှင်းကိုလီးကြိုက်သွားအောင်လိုးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုး၊၊ပင်ပန်းလို့လားမသိဘူးပက်လက်ကလေးခြေပစ်လက်ပစ်အိပ်ပျော်နေတယ်၊။လုံချည်ကမကျွတ်ပေမယ့်ဖြေလျော့နေတာပေါ့၊၊အင်္ကျီပါးပါးအောက်မှာစီကာ့​​လောက်​နို့လုံးလုံးကျစ်ကျစ်​​လေးေ​တွ့ရတော့စို့ချင်လိုက်တာ၊၊ကျနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကနို့စို့ဖို့မဟုတ်ဘူးလေ၊နောက်ဆိုအဖုတ်ရရင်နို့ကကြိုက်သလောက်စို့လို့ရတယ်မဟုတ်လားဒီတော့အဖုတ်ကိုလုပ်ဖို့ထမီလေးဖြေပြီးအပေါ်ကအောက်ကိုလျောချလိုက်တာပေါ့၊အိပ်ရေးပျက်လို့လားမသိဘူးမနိုးဘူးဗျ၊၊ကျနော်နှင်းနှင်းအဖုတ်ကိုကြည့်တော့သိပ်လှတယ်။အမွှေးကလည်းနုနုလေး၊အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကသိပ်လှတယ်၊၊ကျနော်လျှာနှင့်အကွဲကြောင်းတစ်လျောက်ယက်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။မနိုးသေးဘူး၊ဆယ်ချက်လောက်ယက်ပေးလိုက်တာအဖုတ်မှာကျနော့်သွားရေတွေနှင့်ချွဲလာတယ်။။ကျနော်အားမရဘူးခြေနှစ်ချောင်းထောင်းလိုက်တော့အင်းအင်းဆိုပြီးတချက်လှုပ်သွားတယ်မနိုးသေးဘူး၊လျှာနှင့်ကုန်းပြီးအကွဲကြောင်းထဲမွှေလိုက်တော့နှင်းနှင်းလန့်နိုးလာပြီး“ဟာ….ကိုကျော်ဘာလုပ်တာလဲ”“ဖယ်မမသိရင်အားလုံးပြသနာပဲ”ဆိုပြီးရုန်းထွက်ဖို့လုပ်တယ်၊ဝမ်းသွားထားတော့သိပ်မလှုပ်နိုင်ဘူး၊ကျနော်ကလည်းသိတယ်၊ဒါကြောင့်သူ့ရင်ဘတ်ကိုခွမျက်နှာကိုနှင်းနှင်းခြေဖက်ကိုမျက်မှာမူထိုင်လိုက်တယ်၊၊ကျနော့်ကိုယ်လုံးဖိထားတော့နှင်းနှင်းမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး၊၊လူကသာမလှုပ်နိုင်မယ့်လက်ကကျနော့ကျောကိုလက်နှစ်ဘက်နှင့်ရိုက်ပြီး”ကိုကျော် မလုပ်ပါနဲ့သမီးကိုလွှတ်ပါ””မမသိသွားလိမ့်မယ်”ကျနော်ကမလွှတ်တဲ့အပြင်ဖင်ကိုဆွဲမကာဖင်အောက်ခွခေါင်းအုံးသွင်းလိုက်တယ်၊၊ဖင်ကြီးပေါ်ကိုမြောက်တက်လာတယ်၊၊ကျနော်အားရပါးရယက်ပေးလိုက်တယ်၊ငိုနေတဲ့အသံတိတ်သွားတ်၊၊အရည်တွေလည်းထွက်လာတယ်၊၊သူမရုန်းနိုင်တော့ပါဘူး၊အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဖြဲပြီးအစေ့ကိုစုပ်ပစ်လိုက်တယ်၊၊ငါးမီနစ်ေ​လာက်​ယက်​ပေးလိုက်တာ​နှင်းနှင်းတစ်ယောက်တဆက်ဆက်တုန်​​​ပြီးပြီးသွားတယ်၊၊ကျနော်နေရာပြောင်းပြီးပေါင်ကြားဒူးထောက်လိုက်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ကိုကျော်မမသိရင်မိုးမီးလောင်ပါ့မယ်၊၊”“ငါရှင်းနိုင်တယ်နှင်း”ဆိုပြီးအဖုတ်ထဲလီးသွင်းလိုက်တယ်၊၊ပြီးတော့အင်္ကျီကိုအပေါ်တွန်းတင်တင်ပြီးနို့သီး​​ခေါင်း​သေး​သေး​လေး​တွေကိုစို့ရင်းလီးဒစ်​ဖျား​လေးနဲ့အဆုံးအထိမသွင်းဘဲအရည်​လိုက်​လာ​အေင်​တ​ဖြေး​ဖြေးနဲ့ငါးမီနစ်​​လောက်​အသားကျ​အောင်​လိုးနေလိုက်​တယ်၊၊နှင်းနှင်းလဲမရုန်းကန်နိုင်တော့ဘဲမျက်စိပဲမှိတ်ထားရတာပေါ့လေ။ဘယ်လောက်ပဲငြင်းဆန်ဆန်လီးနှင့်အဖုတ်တွေ့ရင်အဖုတ်ကသူ့အလုပ်ကိုသူသိတာပေါ့၊၊မကြာပါဘူးနှင်းနှင်းတယောက်ညည်းသံတိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်လေ၊ဒီတော့ကျနော်အချိန်မဖြုန်းတော့ဘူးအမှေးပါးဟိုင်မင်ကိုထိုးခွဲလိုက်တော့နှင်းနှင်းမျက်လုံးလေးပွင့်လာပြီး”အားးးနာလိုက်တာကိုကျော်ရယ်”တဲ့၊”ခဏလေးပါနှင်းနှင်းမကြာခင်ကောင်းသွားမှာပါ”“မမလာလို့မိသွားရင်ကျမပြသနာတက်ပါ့မယ်”“သင်းသင်းလာဖို့အဝေးကြီးပါ”ကျနော်လည်းအေးအေးဆေးလုပ်လို့ရပြီလေဒီတော့လည်းနှင်းနှင်းကောင်းအောင်နို့စို့ရင်းလိုးလိုက်တယ်၊ပထမတော့ဖြေးဖြေးနောက်တော့အားလည်းသုံးရတာပေါ့၊၊နှင်းနှင်းကကျနော့်ခါးကိုခြေထောက်နှစ်ဘက်နှင့်တောင်ချိတ်လိုက်သေးတယ်၊၊ပါးစပ်ကလည်းတအင်းအင်းတဟင်းဟင်းညည့်းလို့ဒါတောင်သူဝမ်းသွားထားလို့အာလျော့နေတာ၊၊သူသာနေကောင်းရင်အရမ်းကောင်မှာအချိန်အေးအေးဆေးဆေးရလို့သုတ်ထိန်းလိုးတာတောင်ကျပ်ထုပ်နေလို့မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်မှာနှင်းနှင်းရောကျနော်ရောပြီးသွားတယ်။ပြီးသွားတော့ရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ”ကိုကျော်ကျမ ဗိုက်ကြီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”“ဗိုက်ကြီးသွားရင် နင့်ကိုငါယူမယ်”“ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ ကိုကျော်”“ငါ့တာဝန်ထားစမ်းပါ၊ညနေငါဆေးဝယ်လာခဲ့မယ်”ဆိုပြီးအခန်းအပြင်ထွက်လိုက်တယ်၊သတိရလို့သနပ်ခါးတုံးကိုယူပြီးတခါးဂျက်ထိုးတဲ့ဂွင်းကိုထုပစ်လိုက်တယ်၊၊နောက်နေ့အေးအေးဆေးဆေးဝင်လို့ရအောင်လေ။ကျနော်လည်းရေမိုးချိုးပြီးရုံးကိုလစ်လာလိုက်တယ်၊နှင်းးနှင်းကတော့အိပ်ရာကမထနိုင်တော့ဘူးအိပ်ပြီးကျန်ခဲ့တော့တယ်ညနေပြန်ရောက်တော့ သင်းသင်းမရိပ်မိအောင်နှင်းနှင်းကိုဆေးဝယ်ပေးလိုက်တယ်၊၊နောက်တနေ့နံနက်သင်းသင်းဈေးသွားချိန်ရောက်တော့နှင်းနှင်းကထမင်းကြော်လေးထကြော်တော့ကျနော်နှင်းနှင်းနောက်ကနေဖက်ပြီးမွှေးမွှေးပေးလိုက်တယ်နှင်းနှင်းက“ကိုကျော်ရယ်….ကျမတို့မသင့်တော်ပါဘူး”“ဘာလို့မသင့်တော်ရမှာလည်းနှင်းနှင်း”“ကိုကျော်တစိမ်းမဟုတ်ဘူးလေ..မမယောက်ျားဆိုတော့”“အော်နှင်းနှင်းကလဲ ခယ်မနှင့်ခဲအိုဆိုတာဒီလိုပဲ၊ကိုကျော်ကနှင်းနှင်းကိုချစ်နေတာလေ၊”“မမသိသွားရင်မခက်ဘူးလား”“သိသွားတော့လည်းကိုကျော်နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာပေါ့”“ကိုကျော်ကလည်း မနှင်းကရပါ့မလား”“ရအောင်ကြံမှာပေါ့”“ကျမရှက်တယ်ကိုကျော်၊အမယောက်ျားနှင့်ဖြစ်တာ”“အော် …